အဆိုပါအသွင်ကူးပြောင်းမှုအလွန်အစာရှောင်ကြလိမ့်မည်။ ဒါဟာ "ခဏ၌, ခဏ၌တည်၏။ " ပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ် အခြေခံပညာစာသားကို "ဟုအဆိုပါမျက်စိမျက်တောင်ခတ်နိုင်သည်ထက်ပိုမိုမြန်ဆန်။ " ခဏ (ကမှည့်သောofthalmú) တွင် "ခွဲခြားအချိန်" အဖြစ်ဘာသာတစ်ခုယခု "ဟု atomo" တွင်ထုတ်ဖော်ပြောဆို
အသွင်ပြောင်းပေါ်ထွန်းသောသူတို့နှင့်အတူ, ယုံကြည်နှင့်ပီတိဖြစ်ပေါ်ယခုအချိန်တွင်ပြုကြသောငါတို့သည်။ အဆိုပါအသွင်ကူးပြောင်းရေး "နောက်ဆုံးတံပိုးမှုတ်သောအခါ, တခဏအတွက်, ခဏ၌တည်၏။ " ဖြစ်ပျက်ပါလိမ့်မယ် ရှင်ပေါလုသည်ဤအကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည်ကျနော်တို့တဖန်, 1 ကောရိန္သုထဲမှာဖတ်ပါ။ 15: 51-53:
"ငါသည်သင့်ကိုနက်နဲသောအရာတခုကိုပြောပြ: ငါတို့ရှိသမျှသည်အိပ်ပျော်ရကြမည်မဟုတ်ပေမယ့်ငါတို့ရှိသမျှသည်ပြီးခဲ့သည့်တံပိုးမှုတ်သောအခါတွင်မျက်စိတမှိတ်၌, ခဏ၌, ပြောင်းလဲသွားတယ်ခံရကြလိမ့်မည်။ တံပိုးမှုတ်ပါလိမ့်မယ်အဘို့, သေလွန်သောသူတို့သည်ထမည်အကြှနျုပျတို့သအသွင်ပြောင်းလိမ့်မည်။ ဒီဖောက်ပြန်မပျက်စီးတတ်သောများအတွက် imperishable နှင့်အတူသူ့ဟာသူဝတ်စားဆင်ယင်ရမယ်, ဤသေတတ်သောမသေခြင်းအတွက်ဝတ်စားဆင်ယင်ရပေမည်။ "
ပြီးခဲ့သည့်တံပိုးမှုတ်သောအခါ, သေလွန်သောသူတို့သည်ထမြောက်တော်မူလိမ့်မည်သည့်အချက်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်။ ခရစ်တော်သည်အသေဆုံးခဲ့ကြသူများသည်တံပိုးမှာသူတို့ရဲ့သင်္ချိုင်းထဲကရောက်လိမ့်မည်။ သူတို့ကအသကျရှငျကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအသွင်ပြောင်းလိမ့်မည်။
"ဒီဖောက်ပြန်မပျက်စီးတတ်သော" "သေလွန်သောသူတို့သည်" ကျရှငျနကွေသောသူတို့အားရည်ညွှန်းနေစဉ်အတွင်းသေဆုံးနေသောသူတို့ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ?2ကော။ 5: 1-5 အဖြေပေးသည်:
တဲတော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မွကွေီးကျိန်းဝပ်ပြိုပျက်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ဘုရားသခငျ, ကောငျးကငျဘုံ၌ရှိသောထာဝရလူလက်ဖြင့် လုပ်. မရအိမ်တစ်အိမ်ကနေအဆောက်အဦးများဖြစ်ပါသည်ကြောင်းပါလျှင် "ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကိုငါသိ၏။ ဤသည်၌ငါတို့သည်လည်းညည်းတွားနှင့်ကျွန်တော်ကိုဝတ်ဆင်ကြသည်တစ်ချိန်ကကျွန်တော်အဝတ်အချည်းစည်းကိုတွေ့လိမ့်မည်မဟုတ်အဘို့, ကောင်းကင်ကနေသောငါတို့နေရာအရပ်များနှင့်ဖုံးလွှမ်းခံရဖို့သညျ။ ကြှနျုပျတို့သညျဤတဲ၌နေသောအဘို့အ sighs နှင့်ဝန်ကိုထမ်းနေကြတယ်, ကျနော်တို့ unclothed ဖြစ်ချင်သောကွောငျ့, ဒါပေမဲ့သေတတ်သောဘဝအားဖြင့်မျိုစေခြင်းငှါဒါကျော်အဝတ်ကိုဝတ်။ သို့သော်ဤသည်ကျွန်တော်တို့ကိုပွငျဆငျသောသူမူကားအပေါင်အဖြစ်သူလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဝိညာဉ်တော်သည်ပေးတော်မူပြီ။ "ဘုရားသခင်ဖြစ်
တစ်ဦးကရွက်ဖျင်တဲတစ်ခုယာယီယာယီ နေ. အတန်ငယ်အားနည်းနေတယ်။ စမ်းသပ်မှုတွေနှငျ့ပွညျ့စုံတစ်ဦးဘဝတှငျကြှနျုပျတို့ညည်းတွားခြင်းနှင့်ထိုကာလအဘို့အရမ်းမကြာမီဘုရားသခငျသညျကဒီမှာဘဝကိုအဆုံးသတ်ကိုထည့်လေ့မရှိသည့်အခါအတွင်းမှဖြစ်နှင့်သူ၏နိုင်ငံကိုတည်စေမည်။
အဆိုပါအသွင်ကူးပြောင်းမှုလည်းဖီးလ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ 3: 20-21
"ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံသားငါတို့သည်လည်းသူတို့သူခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုနှိမ့်ချ, တတ်နိုင်သောအားဖြင့်အင်အားသုံးခြင်းဖြင့်, သူ့ဘုနျးကွီးသောခန္ဓာကိုယ်ကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညစ်ခန္ဓာကိုယ်ပြောင်းလဲရကြလိမ့်မည်သူကိုကယ်တင်တော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်, စောင့်ဆိုင်းရှိရာကနေ, ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသည်။ "
ယရှေုရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဘုန်းအသရေဖြစ်သည့်ကောငျးကငျခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဝတ်ဆင်ခံရဖို့တောငျ့၏ sighs ။ ငါတို့မြော်လင့်ကိုချွတ်ပယ်နှင့်အစားကိုယ်ခန္ဓာ၏ဘုန်းအသရေနှင့်ငါတို့ကိုöverklädaရဖို့ရှိခြင်းကိုရှောင်ရှားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုဘုရားသခငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုအဘို့ပြင်ဆင်ထားပြီးအတိအကျအရာဖြစ်တယ်။ သန့်ရှင်းသူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏ဘုန်းအသရေကိုဝတ်တဲ့အခါ, ယုံကြည်သူများမဟုတ်သောသူတို့၏အချည်းစည်းဖြစ်ရန်နှင့်အရှက်ကွဲခြင်းကိုခံရပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ကောငျးကငျနိုင်ငံသားများ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုန်းကြီးသောကိုယ်ခန္ဓာကိုကျနော်တို့ကောင်းကင်ကမ်ဘာပျေါတှငျကိုထမ်းဖို့ရှိသည်သောအမျိုးသားရေးဝတ်စုံဖြစ်ကြ၏။